इमेलको सुरुवात कसले गरेका हुन् , ती व्यक्ति को थिए ? » Khulla Sanchar
इमेलको सुरुवात कसले गरेका हुन् , ती व्यक्ति को थिए ?
काठमाडौं : इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सन् १९७१ मा कम्प्युटर इन्जिनियर रे टोमलिन्सनले पहिलो पटक आफैंलाई परीक्षण सन्देश पठाएर इमेलको सुरुवात गरेका हुन् । उनले उक्त इमेल म्यास्याच्युसेटस्थित क्याम्ब्रिजमा रहेको एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पठाएर इमेलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेका थिए ।
उनले त्यसबेला प्रयोग गरेको कम्प्युटर नेटवर्क प्रविधिलाई ARPANET भनिन्थ्यो । यो आधुनिक र जटील नेटवर्कहरुको बिश्वब्यापी सञ्जाल इन्टरनेटको प्रारम्भिक रुप थियो । टोमलिन्सन त्यसबेला बोल्ट बेरानके एण्ड न्युम्यान भन्ने कम्पनीमा काम गर्थे । अमेरिकाको रक्षा बिभागले उक्त कम्पनीलाई सेनाको प्रयोजनका लागि ARPANET बिकासका लागि खटाएको थियो । उनी त्यसै योजना अन्तर्गत त्यहाँ कार्यरत रहेका थिए । प्रयोगकै क्रममा टोमलिन्सनले दुईवटा प्रोग्रामहरुमा परीक्षण गरिरहेका थिए ।